1 Waa Maxay Bayoolojigu (Biology)? – Garanuug
Home / Bayooloji 1 / 1 Waa Maxay Bayoolojigu (Biology)?
Bayoolojigu waa laanta sayniska dabiiciga ah ee la xidhiidha barashada noolaha iyo hababkooda nololeed. Eraygu waxa uu kasoo jeedaa laba eray oo af Giriig ah oo la israaciyey; bios “nolol”, iyo, ,-logos “barashada”. Sidaas awgeed, waxaa lagu fasiri karaa “Nolol-Aqoon”.
Barashada Dhirta (Botany).
Barashada Xayawaanka (Zooloji)
Barashada bayoolojigu waa lamahuraan. Tusaale ahaan, aqoonta bayoolojigu waxa ay lamahuraan u tahay helidda cuntada, iska dhawrista iyo iska dawaynta cudurrada, iyo wixii la mid ah.
Xadaaradihii Mesobataymiya, Masar, Hindiya, Shiinaha, Giriiggii Hore, iyo Roomaankii, intuba aqoontan waa ay ku dedaali jireen waxna waa ay ku kordhiyeen. Culumadii Muslimiinta ahaa ee cilmigan wax ka qoray waxaa kamid ahaa al-Jaaxid oo qoray buugga caanka ah ee Kitaab al-Xayawaan. Waxaa iyaguna wax ka qoray labadii caalim ee al-Raazii, iyo Ibnu Siinaa. Gaar ahaan Ibnu Siinaa waxa uu ka tagey qoraallo badan oo ku saabsan caafimaadka iyo samaynta dawooyinka. Ilaa iyo qarnigii 11d aqoonta bayoolojigu waxa ay ahayd mid inta badan ku kooban Muslimiinta loogana dambeeyo, waxa ayna ku qornayd af Carabi. Wixii intan ka dambeeyey ayaa ay ku faaftay Yurub, iyada oo ka soo gashay dhankii Muslimiinta iyo kitaabbadoodii oo af Laatiin loo turjumey.
Geel © Warsame90 (Flickr) [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons
Geelu macno weyn baa uu ugu fadhiyaa Soomaalida, gaar ahaan reerguuraaga. Soomaalida intooda badani aqoon aad u sarraysa baa ay u leeyihiin geela, noocyadiisa, habka uu wax u cuno, cabbo, u socdo, u tarmo, habdhaqankiisa,…. waxa uu awoodo iyo waxa uusan awoodin….. Haddaba, bayoolojiga laguu sheegayaa waa intaas oo inta la cilmiyeeyey la sii faahfaahiyey. U fiirso suugaanta iyo sheekooyinka Soomaaliyeed sida ay u tilmaamaan xayawaanka kala duwan iyo hab-nololeedkooda. Waxan oo dhani waxa ay soo hoos gelayaan aqoonta bayoolojiga. Aqoontani kaama maqna e in aadan magacan u aqoonin baa dhici karta.
Jim Gathany [Public domain], via Wikimedia Commons.
Waxaa jira qoraallo muujinaya in ay Soomaalidu ogaayeen xidhiidhka ka dhexeeya kaneecada iyo cudurka duumada (Malaria). Richard Burton sahankii uu ku maray dhulka Soomaalida 1850 kii waxa uu sheegayaa in ay Soomaalidu aaminsanaayeen in qaniinyada kaneecadu ay keento xummad halis ah (duumo), taas oo uu ku tilmaamay in ay tahay “khuraafaad” waxba-kama-jiraan ah. 1880 kii wixii ka dambeeyey ayaa saynisyahannada iyo dhakhtarradu ogaadeen xidhiidhka ka dhexeeya kaneecada iyo duumada.
1 Nafaqaysi (Nutrition; ni-yut-ri-shan): nafaqaysigu, sida cuniddu, waa astaan ay wadaagaan dhammaan nooluhu. Waxaana ay cuntadooda ka helaan degaanka ay ku nool yihiin ee ku hareeraysan. Waxa nooli waxa ay cuntada ka helaan tamar ay ku qabsadaan hawlahooda kala geddisan ee ka dhacaya habdhisyada jirkooda.
2 Neefsasho (respiration; res-pi-ray-shan): nooluhu cunnada uu quuto inteeda badan waxa uu u adeegsadaaa dhalinta tamar u suuragelisa qabashada hawlaha nololeed ee kala geddisan, sida makiinaduhuba u qaataan shidaal ay tamar ka dhaliyaan. Habka nooluhu tamarta uga dhaliyo cunnada ayaa lagu magacaabaa neefsasho, waana adeegsi ka duwan macnaha caadiga ah ee eraygaas loo yaqaanno. Noolaha oo idil, marka laga reebo in yar oo baakteeriya ah, waxa ay hawada ka qaataan oksijiin ay cunnadii ku gubaan, iyaga oo isla markaana hawada ku daraya kaarboon laba-oksaaydh (CO2), iyo uumi-biyood. Gubidda cunnadu uma baahna heerkul badan, ee waxaa ku filan heerkulka jidhka noolaha.
Xaarwelwaal. © Peter van der Sluijs [CC BY-SA 3.0] , via Wikimedia Commons.
Haramcad Eryanaya Deero © Profberger [CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
Digaagad yar oo koraysa
Dhaawac u baahan kabitaan.
Dhaawac bogsooday (kabmay)